नेपाल आइडल : सागर आले पहिलो पटक डेन्जर जोनमा जानुको सनसनी खुलाशा खासमा के रहेछ त ? - hamro Desh
नेपाल आइडल : सागर आले पहिलो पटक डेन्जर जोनमा जानुको सनसनी खुलाशा खासमा के रहेछ त ?
नेपाल आइडलको Top ७ मा सागर पुगेपछि चितवनका हजारौं संगीत प्रेमी युवाहरु उत्साहित छन् । हरेक तह र तप्काबाट सागरलाई साथ र सहयोग मिलिरहेको छ । पटिहानी चितवन निवासी नेपाल आईडलको टप टेनमा प्रतिस्पर्धा गरि रहेका सागर आले टप १२ देखि दर्शकको भोटिङको आधारमा छनोट हुदै आएका सबैमध्येका बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् ।
उनी अहिलेसम्म डेन्जर जोनमा परेका थिएनन तर हिजोको प्रस्तुति पछि पहिलो पटक आज डेन्जर जोनमा परेका छन् । उनलाई नेपाल आईडल भएको हेर्न दर्शकहरु व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तर सबैले धेरै भन्दा धेरै भोटिङ नगरेसम्म सागर नेपाल आईडल बन्न सक्दैनन् ।
सागर आलेलाई अझै अगाडी बढेको देख्न चाहानु हुन्छ भने भोट गर्न मोबाईलको म्यासेज बक्समा गई १३ टाईप गरि ३५२२५ मा पठाउन सकिने छ । यस्तै विदेशमा बस्ने दर्शकहरुले नेपाल आईडलको मोबाईल एप्लीकेशन डाउनलोड गरेर सागरलाई भोट गर्न सकिनेछ । nayabato बाट साभार
दिलिपसिंह विष्टले खोले निर्मला हत्याको सबै पोल (हेर्नुस भिडियो)